ခွေးဝဲစား ချက်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးဆိုပီး ပုံမှားရိုက်ထားတဲ့ အရပ်သား လင်မယားစုံတွဲပုံအားတွေ့ရစဉ်(မကြာမှီ ပြန်ဖျက်ပေးသွားပါမည်)
မအေလိုး ချက်ကြီး မင်းဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲဟ...ပြောလေ ကဲလေပါလား..
ကတုံးမြင်တိုင်း ဘုန်းကြီးလို့ မင်းကထင်နေတာလားမသိဘူး..မင်းစိတ်တွေ ပုံမှန်ကော
ဖြစ်သေးရဲ့လားဟ မင်းကို စိတ်ရောဂါဆေးရုံကို ပို့ပေးရမလား.
.ကတုံးဖြစ်တိုင်း ဘုန်းကြီးလို့ စွပ်စွဲစတမ်းဆိုရင် ကတုံးကေပိုင်ရှင် ဇီဒန်းတို့
ရော်နယ်ဒိုတို့ ဘားသဇ်(က်)တို့လို ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေက
သူတို့ဆော်လေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံ့တာတွေကိုလဲ ဘုန်းကြီးဇာတ်လမ်းဆိုပီး ဘလော့မှာ
တင်နေမယ်ဆိုရင်ချက်ကြီးရေ မင်းသာ ပျံတော်မူသွားမယ်ဟေ့ကောင်ရ..
တင်လို့တောင် ပီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဟေ့ကောင်ချက်ကြီး..မင်းတော်တေ်ာစုတ်တဲ့လူပါလား.
မင်း ထမင်းဝအောင်စားထား သိလား..မင်းကို အာဏာပိုင်တွေက အရှင်ရအောင်အမ်ိဖမ်းဘို့
ို့ စုံစမ်းနေကြပီဆိုတာ သိရဲ့လားဟ..
ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးရယ်နော် ခွေးဝဲစား ငမိုက်သား ချက်ကြီးရေ...
.မင်းဘိုးဘေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုမိုးကျတို့ ရာဟုမောင်မောင်တို့ သွားရာလမ်းကို
မင်းလဲတဖြည်းဖြည်းလိုက်ရဖို့ နီးနေပီဆိုတာ သိလား..SEXY-Blogger သမားတွေဖြစ်တဲ့
သူတို့တွေရဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းခန်း ဘယ်လို အဆုံးသတ်ခဲ့ကြရသလဲဆိုတာ သိရအောင်
ငါပြောပြမယ် .သိချင်ရင် မင်းအနေနဲ့ ငါ့အီးမေးအကောင့်ကို အက်ထားလိုက်ပါ.
အခု ဒီစာထဲမှာ ထည့်ပီးမရေးတာဟာ သူတို့ မိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့
ဂုဏ်သိက္ခာကို ငဲ့ညှာတဲ့ သဘောကြောင့်ပါ.. ရှင်းရှင်းပြောရရင် ငါက မင်းလိုတော့
မယုတ်မာတတ်ပါဘူး ..ငါ့အီးမေးအကောင့်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတယ်
အက်ထားလိုက် သိလား.မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးရှင်းလင်းချင်လို့ပါ..
ဒါဘဲနော် ခွေးဝဲစား ချက်ကြီး
ရေးသားချိန်- 00:392comments:
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ မဖြစ်စလောက် တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ကျောင်းအဖြစ်
ဖန်တီးကာ Sexy Producerလုပ်ငန်းဖြင့် သာသနာပြုနေသည့် မ်ိန်းမပေါင်းစုံကို လိုးအားရမှ ဘုန်းကြီး
ဘောင် သာသနာဘောင်ထဲကို ပေါချောင်ကောင်း ၀င်ရောက်လာခဲ့သူ ဒုလ္လဘရဟန်းတော်
ဦးညာဏသာရဟု နာမထင်ရှား ဒေါက်တာချက်ကြီးသိစေရန် အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်နဲ့
ခွေးဝဲစားလောက်မှ အဆင့်မရှိတဲ့ စောက်ချက်ကြီးရေ မင်းတင်စရာတွေရှိရင် မြန်မြန်တင်ထားပေတော့..
ဘာလုပ်မှမယ်မယ်ရရ မလုပ်ပဲ အများပြည်သူအတွက်လဲ အကျိုးမများ အကုသိုလ်တွေသာ ပွားပေးနေတဲ့
မင်းလို စောက်ကောင်ကို အာဏာပိုင်တွေက အပူတပြင်း ရှာနေကြပီလို့ကြားနေရပြီ..
.ဘလော့ဂါနေဘုန်းလတ်တစ်ယောက် ထောင်ကျတာက မင်းထက်စာရင် အများကြီး တန်ဖိုးရှိတယ်
မဟုတ်လား..ဟေ့ကောင်ချက်ကြီး ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါကွာ..မင်ပြောခဲ့တဲ့ စကားလုံးတစ်ခုကို အမှတ်ရသေးလားမသိဘူး" မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာမရှိ"ဆိုတာလေ..အေးကွာ ဒီတော့ မင်းလဲ လုပ်စရာရှိတာ မြန်မြန်လုပ်ထား အာဏာပိုင်တွေကတော့ မင်းလိုလူစုတ်ကို အပူတပြင်းရှာဖွေနေကြပြီ
.မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးကိုတော့ မင်းလျှော့မတွက်လေနဲ့..၂၀၀၇ခုနှစ်
စက်တင်ဘာသံဃာအရေးခင်းကာလမှာ နောက်ကွယ်ကနေ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ဆရာတော်
ဦးဂမ္ဘီရကိုတောင် အရှင်လတ်လတ်ရအောင် ဖမ်းခဲ့သေးတာမဟုတ်လား .. အာရှမှာနေသယောင်ယောင်
ဥရောပမှာနေသယောင်ယောင် လူယောင်ယောင် ဘုန်းကြီးယောင်ယောင် ယောင်ခြောက်ဆယ်နဲ့
အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စကားလုံးတွေနဲ့ အကဲပိုနေတဲ့ မင်းလိုခွေးဝဲစားလောက်ကတော့
ဒီတော့ကွာ.. မင်းကို ငါပြောချင်တာက အမတန်မှ ရခဲ ကြုံခဲ ဖြစ်ခဲလှတဲ့ ဤလူဘ၀ကြီးကို
ိုရလာခိုက်လေးမှာ လောကကောင်းကျိုး၊အမျိုးဘာသာ သာသနာကောင်းကျိုးကို မင်းအနေနဲ့ သီတဂူဆရာတော်၊ဗမော်ဆရာတော်၊ပီနန်းဆရာတော်၊နာရေးကူညီမှုအသင်း
ကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ ဦးကျော်သူ၊ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာအစရှိတဲ့အာဇာနည်တွေလို..
အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် အများပြည်သူအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ
အကျိုးပြုနေကြတဲ့ Dhammadownload,BuddhaFM,Burmese classic,
အစရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေလို မစွမ်းဆောင်နိုင်ရင်တောင်မှ အများပြည်သူ
တွေကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ မင်းရဲ့ကိလေသာပွားစရာ အကုသိုလ်ပွားစရာ
အကျိုးမရှိတဲ့ Sex Producerလုပ်ငန်းကြီးကိုရပ်တန့်ပေးစေချင်တာဟာ
မင်းအပေါ်မှာထားတဲ့ ငါရဲ့ အနှိုင်းမဲ့စေတနာပါလို့ပြောရင်
မင်းယုံမှာမဟုတ်မှန်း ငါသိပေမယ့် မင်းမှာ လူပီသတဲ့ စိတ်ကလေးဝင်လာရင် ငါအနေနဲ့
ဲ့ ဒီစာကိုရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ ခွေးဝဲစားချက်ကြီးရေ.. လူမပီသတဲ့ ချက်ကြီးဘ၀ကနေ မြန်မြန်
ရုန်းထွက်နိုင်ပါစေလို့ အားနာပါးနာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ...
(တောင်းပန်ချက်)အထက်ပါ အိပ်ဖွင့်ပေးစာထဲတွင် အမတန်ရိုင်းစိုင်းသော စကားလုံးများ
ပါသွားခဲ့ရခြင်းမှာ လူလို ဆုံးမလို့မရတော့သည့် ဦးညာဏသာရ(ခ)ခွေးဝဲစား ဒေါက်တာ
ချက်ကြီးကို နှိပ်ကွက်သောအားဖြင့် ကျနော်အနေဖြင့် ၀မ်းနဲစွာ သုံးစွဲခဲ့ရသည်ကို မိဘ
ပြည်သူများ သိရှိနားလည်ပေးကြပါရန် ရိုသေ လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ရေးသားချိန်- 23:445comments:
Labels: ချက်ကြီးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုတာ ဘုနုးကြီးတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်လိုက်ပြီ................
Sex Producer(S.P)ဘွဲ့ရဒေါက်တာချက်ကြီး(ခ)ဒုလ္လဘရဟန်းတော် ဦးညာဏသာရအားဖူးတွေ့ရစဉ်
ဒကာတော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လထဲတုန်းက ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ဘလက်ကောင်းမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အကူညီနဲ့ အမှတ်မထင်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်... ကျောင်းရောက်တော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ရှိခိုး ကန်တော့ချင်လို့ဆိုပီး ဆရာတော်အခန်းထဲကို တံခါးဖွင့်ပြီး ၀င်ရောက်ရာမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ သံသယ တစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်..ဘာလဲဆိုတော့ ဒကာတော် အခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်းဘဲ ဆရာတော်ဟာ အခန်းပြင်ကို ထွက်သွားပြီး သူ့ကပ္ပိယကျောင်းသားတွေကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေတာကို တွေရှိရပြီး မကြာခင်မှာဘဲ အခန်းထဲကို ပြန်ဝင်လာကာ ဒကာလေးကဘယ်ကနေ လာတာတုန်းဆိုပီး မေးကာ နောက်တစ်ခါ ကျောင်းလာရင် အခုလို အခန်းထဲကိုဝင်လာစရာ မလိုဘူး အပြင်ကနေဘဲ စောင့်နေပါလို့ မိန့်ကာ သူ့ကွန်ပျူတာ ဖွင့်လိုက်တာကိုအကဲခတ်ကြည့်တော့ ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုတဲ့ ဘလော့နာမည်ကို မျက်ဝါထင်ထင် တွေ့ရှိလိုက်ရပြီး စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါတော့တယ်...အော် ဒါဟာ ဘလော့ကိ်ု ပို့စ်တင်နေတာပါလားလို့ အတွေးပေါက်ပြီး ကောက်ချက်ချမိတာကတော့ ဒေါက်တာချက်ကြီးဆိုတာ ဒီဘုန်းကြီးဖြစ်လိမ့်လို့စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ဘုန်းကြီးအခန်းထဲကနေ ကန်တော့ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်၊။ တိူက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုသလို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ ကင်မရာကိုဒကာတော်အိပ်ရာဘေးမှာ တွေ့ရှိလို့ ကင်မရာကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဒေါက်တာချက်ကြီးဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယို ဓာတ်ပုံအများစုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ်.. အင်း ..ဒါဆိုရင်တော့ သေချာပီ ဒေါက်တာ ချက်ကြီးဆိုတာ အခြားမဟုတ်.. ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုတာဒကာတော်ဟာ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့လို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံအယ်လဘမ်ထဲကနေ ဦးညာဏသာရတစ်ပါးတည်းရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို မသိအောင် ယူလာခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အကြောင်းကို သိသမျှလေ့လာစုံစမ်းကာဒေါက်တာချက်ကြီးဟာ
ခတ်လိုက်ရပါသည်။ ဘာသာရေး သာသနာရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သယ်ပိုး နေကြသည့် ဆရာတော် သံဃာတော်များကို တောင်းပန်ရးင် ဤစာကို ရေးသားပေးပို့လိုက်ရပါသည်ဘုရား....
(မှတ်ချက်)မိမိမေးထဲသို့ ပေးပို့လာသော လူတစ်ဦး၏စာကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားချိန်- 22:202comments:
ဦးဇင်းညာဏသာရခေါ် ဒေါက်တာချက်ကြီးသို့ အထူးလျှောက်ထားချက်
ရိုသေစွာ ခြေတော်ဦးခိုက် ရှိခိုးလျှောက်ထားအပ်ပါသည် ဦးဇင်းညာဏသာရဘုရား.......
( ၁၊ ) ဦးဇင်းညာဏသာရဟာ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ဘလက်ကောင်းရှိ
ညာဏရောင်ခြည် ဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်လျှက်ရှိကြောင်း
တပည့်တော်တို့ မလေးရောက် ဒကာ ဒကာမများက သိရှိနေကြပါပြီဘုရား.....
(၂) ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့ သဘာဝမို့ တစ်ခါတစ်ရံ မှားတတ်ကြစမြဲမို့
တပည့်တော်တို့ အနေနဲ့ အပြစ်လို့ မယူဆဘဲ ခွင့်လွှတ်သီးခံနိုင်ကြပါတယ်ဘုရား၊
သို့သော်လည်း အပြစ်ကို အပြစ်လို့ ဦးဇင်းချက်ကြီး ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံသိရှိပြီး အခုလို
ဘုန်းကြီးဘ၀နဲ့တော့ Sexy Blog ဖွင့်တာကို အချိန်မှီရပ်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
တပည့်တော်တို့ အနေနဲ့ အထူးဝမ်းသာကြမှာ အသေချာပဲလို့ လျှောက်ထားရဲပါ
(၃) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လျှောက်ထားရသော် ပထမတုန်းက ဒီဘလော့ဟာ ဘုန်းကြီး
တစ်ပါးဖွင့်တယ်ဆိုတာ မထင်ခဲ့မိပါဘူး..ဘလော့သက်တမ်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ
နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းများက ''ချက်ကြီး ဘလော့ကို ဖွင့်တာက တို့မလေးရှား
မှာ ကျောင်းထိုင်နေထိုင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါး'' လို့ ပြောဖန်များလာလို့ နီးစပ်ရာ အဆက်သွယ်
တွေနဲ့ လိုက်လံမေးမြန်း စုံစမ်းကြည့်ရာမှာတော့ ကွာလာလမ်ပူ ဘလက်ကောင်းမှာရှိတဲ့
ညာဏရောင်ခြည် ဓမ္မ၀ိဟာရကျောင်းက ဦးဇင်းညာဏသာရ ဆိုတာ အခုလို သိရှိခဲ့ရလို့
အရမ်းကို စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာ ဖြစ်ခဲ့မိတာအမှန်ပါဘုရား......
(၄) ဦးဇင်းညာဏသာရလို့ သိရှိပြီးပြီးချင်းမှာမှာပင် ဦးဇင်းမေးထဲသို့ ဒီဘလော့ကို
အချိန်မှီ ပိတ်ပေးဘို့ အကြိမ်ကြိမ် သတိပေး လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း ဦးချက်ကြီးဟာ
မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ဆက်ဖွင့်နေတာကြောင့် အခုလို လူသိရှင်ကြား လျှောက်ထားရတဲ့
အတွက် ဘာသာ သာသနာအတွက် အားနာမှု စိတ်မကောင်းမှုများစွာ ဖြစ်မိပါသည်ဘုရား....
(၅) နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဦးညာဏသာရကို တောင်းပန်လျှောက်ထားလိုသည်မှာ
သာသာနာ ဘာသာမျက်နှာကို ငဲ့ကွက်သောအားဖြင့် အခုလက်ရှိ ဖွင့်နေဆဲဘလော့ကို
တတ်နိုင်သမျှ မြန်ုမြန်ရပ်တန့်ပေးဘို့ မလေးရောက် ရွှေမြန်မာ လူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်စား
တပည့်တော်က သနားခံ လျှောက်ထားရင်း တပည့်တော်ရဲ့ လျောက်ထားချက်ကို
(အသိပေးခြင်း)မှန်ကန်သူတို့ဆုံမှတ်ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရေးသားချိန်- 22:122comments:
ရေးသားချိန်- 22:046comments: